Umgaqo-nkqubo wemfihlo | Isiseko soMvuzo - Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Resources umthetho wabucala
Umgaqo-nkqubo wabucala ubeka indlela iSiseko soMvuzo esisebenzisa kwaye sikhusela ngayo nayiphi na ingcaciso oyinika uMvuzo weSiseko xa usebenzisa le webhusayithi. Isiseko soMvuzo sizibophelele ekuqinisekiseni ukuba imfihlo yakho ikhuselekile. Ukuba singakucela ukuba ubonelele ngolwazi oluthile onokuchongwa ngalo xa usebenzisa le webhusayithi, unokuqiniseka ukuba iya kusetyenziswa kuphela ngokuhambelana nesi sitetimenti sabucala. Isiseko soMvuzo sinokutshintsha lo mgaqo-nkqubo amaxesha ngamaxesha ngokuhlaziya eli phepha. Kuya kufuneka ujonge eli phepha amaxesha ngamaxesha ukuqinisekisa ukuba wonwabile ngalo naluphi na utshintsho. Lo mgaqo-nkqubo usebenza ukususela nge-23 Julayi 2020.
Amagama abantu ababhalisela iakhawunti kunye neVenkile yeSiseko soMvuzo
Iinkcukacha zoqhagamshelwano kuquka idilesi ye-imeyile kunye ne-twitter
Ulwazi loqhagamshelwano lwabantu ngabanye okanye imibutho yokuthenga izinto okanye iinkonzo
Olunye ulwazi olufanelekileyo lokulawula le website
Iicookies. Ngolwazi oluthe kratya, bona eyethu Policy Cookie
Sifuna olu lwazi ukuba siphendule kumbuzo wakho, ukuthengisela iimpahla okanye iinkonzo ngevenkile yethu, ukukunika incwadana ukuba ubhalisile kunye nohlalutyo lwangaphakathi ngeenjongo zentengiso okanye zentengiso.
Ukuba unqwenela ukurhoxa kwiincwadana zethu, kukho inkqubo ezenzekelayo yokuba uyeke ukufumana enye imbalelwano evela kwiThe Reward Foundation. Ngenye indlela ungaqhakamshelana nathi ngephepha elithi “Qhagamshelana” kwaye siza kukuqinisekisa ngokususwa kwakho kuluhlu.
Ivenkile inikezela ngenkqubo yokuba ucime iakhawunti yakho. Siya kuthi emva koko sicime yonke idatha yobuqu enxulumene neakhawunti.
Unokucela iinkcukacha zolwazi lomntu siqu esizibambe ngawe phantsi koMthetho woKhuseleko lweDatha 1998. Umrhumo omncinci uya kuhlawulwa. Ukuba ufuna ikopi yolwazi olugcinwe kuwe nceda ubhalele iSiseko soMvuzo c / o I-Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR United Kingdom. Ukuba uyakholelwa ukuba naluphi na ulwazi esikubambe kuwe aluchanekanga okanye aluphelelanga, nceda ubhalele okanye usithumelele i-imeyile ngokukhawuleza, kule dilesi ingentla. Siza kulungisa kwangoko naluphi na ulwazi olufunyenwe lungachanekanga.
Ivenkile yeVuvu yeSiseko
Siqokelela ulwazi malunga nawe ngexesha lenkqubo yokuphuma kwivenkile yethu. Oku kulandelayo yinkcazo eneenkcukacha ngendlela esiphatha ngayo iinkqubo zomgaqo-nkqubo wabucala ngaphakathi kweVenkile.
Oko sikuqokelela kunye nokugcina
Ngoxa u tyelela indawo yethu, siya kulandela:
Iimveliso ozibonayo: siza kusebenzisa oku, umzekelo, ukubonisa iimveliso oza kuzijonga
Indawo, idilesi ye-IP kunye nohlobo lwesiphequluli: siya kusebenzisa oku ngenjongo ezinjenge-estimation tax and shipping
Idilesi yokuthumela: siya kukucela ukuba ungene kulo ukuze sikwazi, umzekelo, ukuqikelela ukuthumela phambi kokuba ubeke umyalelo, kwaye ukuthumelele umyalelo!
Siza kuphinda sisebenzise ii-cookies ukugcina umxholo webhasikithi ngelixa ukhangela indawo yethu.
Xa uthenga kuthi, siya kucela ukuba usinike iinkcukacha Ukubandakanya igama lakho, idilesi billing, idilesi yokuthumela, idilesi yemeyile, inombolo yomnxeba, ikhadi lamatyala / iinkcukacha zentlawulo kunye nolwazi-akhawunti ngokuzithandela ezifana lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Siza kusebenzisa olu lwazi ngenjongo, njengaye, uku:
Thumela ulwazi lwakho malunga ne-akhawunti yakho kunye ne-oda
Phendula izicelo zakho, kubandakanywa ukubuyiselwa kwembuyekezo kunye nezikhalazo
Inkqubo yentlawulo kunye nokukhusela ubuqhetseba
Setha i-akhawunti yakho kwivenkile yethu
Ukuthobela nayiphi na imbopheleleko esemthethweni esinayo, njengokubala kweerhafu
Ukuphucula imveliso yethu yokugcina
Ukuthumela imiyalezo yokuthengisa, ukuba ukhetha ukuwamkela
Ukuba udala i-akhawunti, siya kugcina igama lakho, idilesi, i-imeyile kunye nenombolo yefowuni, eya kusetyenziselwa ukubeka i-checkout kwii-oda ezizayo.
Ngokuqhelekileyo sigcina ulwazi malunga nawe okoko sifuna ulwazi ngeenjongo esiziqokelele kwaye sizisebenzise, ​​kwaye asikho mthethweni ukuba siqhubeke sizigcina. Umzekelo, siya kugcina ulwazi lwe-oda iminyaka eli-6 ngeenjongo zerhafu kunye nezobalo. Oku kubandakanya igama lakho, idilesi ye-imeyile kunye nee-adresi zokuhambisa kunye nokuthumela.
Siza kugcina kwakhona izimvo okanye izimvo, ukuba ukhetha ukuwashiya.
Ngubani eqela lethu eli fi kelele
Amalungu eqela lethu afikelele kwiinkcukacha osinike zona. Umzekelo, bobabini abaPhathi kunye nabaPhathi beZitolo bangafikelela:
Ulwazi lwe-oda njengento ethengwe, xa kuthengwe kwaye apho kufuneka ithunyelwe khona, kwaye
Ulwazi lomthengi njengegama lakho, idilesi ye-imeyile, kunye nolwazi lokuthengisa kunye nolwazi lokuthumela.
Amalungu ethu ekomiti afumaneka kule ngcaciso ukunceda ukuzalisekisa ii-oda, inkqubo yokubuyiselwa kwembuyekezo kunye nenkxaso yakho.
Oko sikubelana nabanye
Ngaphantsi kwalo mgaqo-nkqubo wabucala sabelana ngolwazi nabantu besithathu abasincedayo ukuba sinikeze iiodolo zethu kunye neenkonzo zokugcina kuwe; umzekelo i-PayPal.
Siyamkela iintlawulo nge PayPal. Xa uhlawula iintlawulo, enye idatha yakho iya kudluliselwa kwi-PayPal, kuquka ulwazi olufunekayo ukucwangcisa okanye ukuxhasa ukuhlawulwa, njengolwazi lokuthenga kunye nenkokhelo.
Nceda ubone Inqubomgomo Yobumfihlo yePayPal Ezinye iinkcukacha.